सानिमाकी छोरी – भाग २ - Nepali Sex Tube
सुदिक्षाले ब्याङ्केट भित्रबाट मेरो हात समात्न थाली। अनि टिभी हेर्दा हेर्दा उ मेरो शरीरमा लपक्क टाँसिइ। मेरो स्वास लामो लामो हुन थाल्यो। के यहि हो त मौका?मैले सुदिक्षाको पेट निर हात राखे।उ झंसङ्ग भइ, ‘दादा के गर्या?’, उसले यसरी भनी कि लाग्यो उ निकै रिसाएर बोल्दै छे।मैले तुरुन्त हात हटाए।
उ केही बेर मलाइ नछोइ बसी। यता म भने पछुतो मान्दै थिए। उ आफै आएकै थिइ, मैले बेक्कारमा बिथोलिदिए। लाग्यो कि यसरी लपक्क टाँसिनु उसको लागि यौन सम्बन्धी कुरा होइन। केवल मैले मात्र कामुक ढंगले सोचिरहेको छू। सायद उ त आफ्नो दादासंग बहिनीको नाताले नजिकिएकी होली। तर म भने निकै अगाडी बढेर सोच्दै छु। उ त पवित्र छे, विचरी केही अनुभव छैन, सोच्नै सक्दिन सायद यी कुरा जुन मैले सोच्न सक्छु। बोका त म पो हुँ, उ त कलिली छे। मैले उसलाइ त्यसो गर्न नहुने।केही बेरमा उ फेरी मसंग टासिन आइ। उसको शरीरको तातो स्पर्शले म पनि तातिन थाले। तर अहँ यो पटक मैले उसको शरीरलाइ छुने प्रयत्न गर्न सकिन। मात्र उसले मलाइ च्यापेर सुतिरही।
‘अघि के भयो?’, मैले उसको मुख निमोठ्दै भने।
‘केही नाइँ’, उ रिसाएजस्तो गरी झर्की। तर उसले अझै मेरो पाखुरा समातेकी थिइ। उसका लम्पसार परेका खुट्टाहरु मेरो खुट्टाहरुसंग खप्टिएका थिए। म त्यतिकै निदाएछु। बिहान उठ्दा उ मेरो छातीलाइ सिरानी गरेर सुतिरहेकी थिइ। उसको कपाल बिजोग भएको थियो। बिस्तारै उसको अनुहारबाट कपाल पन्छाउदै गए। यता मेरो कट्टु भित्र चिज गरम हुन थाल्यो। उसको छातीले मेरो शरीर बेला बखत दबाब दिदाँ म झनै तरङ्गि हुन्थे। केही बेर कपाल सुमसुम्याए। उ निन्द्राबाट ब्युँझिइ। कपाल चलाइदिराखे। लठ्ठ परेको आँखाले मलाइ हेरी।उ मेरो उत्तानो शरीरमाथी चढेर घोप्टो परी। अनि टाउको मेरो घाँटी नेर राखेर सुत्न थाली। उसको छाती मेरो छातीको माथी धड्किरहेको थियो। अनि मेरो सारा शरिर उसको तौलले चेपियो। मैले उसको कपाल चलाइदिराखे। उसले बिस्तारै आफ्ना हातहरु मेरो घाँटीको वरिपरि कस्न थाली। उ मलाइ सुतेर अंगालो हाल्दै थिइ। झन्डै एकघन्टा उ यसरी नै लठ्ठिएर ममाथी घोप्टिरही। म पुरै भिजिसकेको थिए। अनि घन्टा देखि ठन्किरहेकाले दुख्न थालेजस्तो भएको थियो। मैले उसलाइ साइड लगाएर उठ्न खोजे।
‘एक छिन न!’, उसले छोड्नै मानिन।
‘मलाइ सु आयो के।’, मैले उसको कानमा भने।‘एकछिन रोकेर राख्नु न।’, उसले अझै कसेर समाति। उसको स्तन मेरो छातीमा चेप्टो भएर चेपिएको महसुस भएको थियो।उसलाइ सायद मेरो शरीरको तातो मात्र लागेको थियो। मेरो लागि त उसको शरीरको स्पर्श नै ठूलो उत्तेजक कुरा थियो, झन् माथी नै आएर बिहानै खप्टेपछि त खपिसाध्य भएको थिएन।‘म कान टोक्दिन्छु क्यारे।’, मैलै उसको कानमा गएर भने।उसले केही बोलिन।मैले साच्चै उसको कानको लोतीमा बिस्तारै दाँत गाढे।उसले केही प्रतिकार गरिन।मैले उसको कान दाँतले टोकेर बिस्तारै जिब्रोले चलाउन थाले।उसले केही भनिन। तर फेरी एक्कासी रिसाइ भने? मैले उसको कान छोडिदिए।‘गर्नु न एकछिन।’, उसले बिस्तारै भनी।‘के गर्नु?’, मैले सोधे।‘कानमा भर्खर जे गर्नु भ’को थियो।’‘मज्जा हुन्छ?’
‘अँ, हुदो रैछ’, उसले भनी।मनमा लड्डु पाक्यो।
मैले उसको कान फेरी टोक्न थाले। अनि जिब्रोले खेलाउन थाले। लोतीबाट सुरु गर्दै उसको सबै कान भरी मेरो जिब्रोको थुकले भिज्न थाल्यो। मैले जिब्रोले खेलाउँदै बेला बेला चुस्न थाले। १० मिनेट पछि त केवल चुस्न मात्र थाले। कानको हरेक भाग जिब्रोले चलाउँदै चुस्दै गए।झन्डै १५ मिनेट पछि उ एकाएक उठी अनि नबोली बाथरुम छिरी। १० मिनेटमा निस्की। अनि म छिरे।‘दादा आज होटलमै बसम है।’, उसले भनी।‘किन?’‘मलाइ कतै हिड्नै मन छैन आज, बेलुका मात्र निस्के हुन्न?’, उसले सोधी।‘हुन्छ।’ मैले बाथरुम भित्रै बाट भने।म बाहिर निस्किदा उ खाटमा पल्टेर टिभी हेरिरहेकी थिइ। मैले रिसेप्सनमा फोन गरेर खाना रुममै ल्याइदिन भने।म पनि खाटमा पल्टे। उसले केवल समिज र सानो कट्टु मात्र लगाएकी थिइ। अनि मैले उठेदेखि टिसर्टलगाएको थ‍िइन। म उसको साइडमा पल्टे। उ नजिकै आइ। टाँसिएर सुती। अनि एउटा हातले मेरो छातीको रौं खेलाउन थाली।‘के भयो तिमीलाइ?, मैले सोधे।‘नाइ केही भएको छैन।’, उसले भनी।
‘बाहिर निस्कन चाही किन नखोज्या, अल्छि लाग्या हो पोखरा?’
‘होइन, त्यही लेकसाइड त हो, कति जानु के। बेलुका रमाइलो हुन्छ, अहिले होटलमै बसम’, उसले भनी।
यति भनेर उ फेरी मेरो शरीरमाथी चढेर अघिको जस्तै गरी घोप्टो भएर मलाइ अंगालो हाली।
मैले उसको कान फेरी चुस्न सुरु गरिदिए।
अनि अनायासै एउटा हात उसको कम्मरबाट माथी उसको ढाड भित्र छिराएछु। तर उसले केही प्रतिकार गरिन। माथी माथी सर्दै सर्दै उसको सबै ढाड मुसार्न थाले। पुरै हत्केलाले उसको ढाड मुसार्दै उसको कान चुस्दा म फेरी कडा अनि पानी पानी भइरहेको थिए। उसका साँप्राहरु मेरो साँप्रामाथी थिए। अनि मेरो कट्टु भित्रको दबाब बेला बेला उसको साँप्रामा पर्थ्यो। सुरुमा त उसको साँप्रा छलिरहेको थिए। बिस्तारै उसलाइ थाहा भएनी भओस् जस्तो लाग्यो। अनि त भित्रबाट ठन्केको लाडोले उसको साँप्रामा खुलेआम दबाब दिन थाल्यो। सायद उसले त्यो याद गरिन, उ मलाइ अंगालो हाल्न मस्त थिइ। अनि म उसको कान र ढाडमा आनन्द दिदै थिए।
मेरो अर्को हातले उसको घाँटी सुमसुम्याउँदै उसको ओठसम्म पुर्याए। मैले ओठमा केही गर्नु पहिले नै उसले मेरो औलाको टुप्पा जिब्रोले चलाउन थाली। अनि त उसले आफै मेरो चोरी औला मुख भित्र छराएर चुस्न थाली। ललिपल चुसेझै।
‘दादा छि, नङ काट्नु त।’, उ झटपट उठी।
‘नेलकटर छैन’, मैले भने।
उ खाटमा बसी, अनि मेरो हात समातेर औलाहरु हेर्न थाली। अनि बिस्तारै आफ्नो ओठ नजिक लगि अनि नङ टोक्न थाली। झन्डै ५ मिनेट उसले मेरो नङ टोकेर सकिदिइ।‘खै तिम्रो कस्तो छ?’, मैले उसको सुकोमल हात समाते। उसका हातका नङ अलिकति मात्र लामो थियो।‘लामै रैछ।’, मैले भने अनि उसले गरेझै बिस्तारै उसको औलाको नङ टोक्न थाले।उ खाटको साइडमा ढल्की।ढोका ढकढक भयो। खाना लिएर आएको रहेछ।उ खाटबाट उठि अनि कुर्सीमा आएर बसी।छुट्टा छुट्टै भाँडामा फरक फरक परिकार थिए। अनि दुइ वटा प्लेट अनि चम्चाहरु थिए।उसले एउटा प्लेटमा खाना, दाल, तरकारी अनि अरु परिकारहरु राखी।‘यसैबाट खाए हुन्न?’, उसले सोधी। मनमनै खुसी हुँदै ‘हुन्छ भने।’कसम यो जतिको कामुक कुरा मैले त्यो बेलासम्म गरेको थिइन।
उसले खाना मुछेर आफु खान्थी अनि मलाइ खुवाउँथी। उसको औलामा लागेको खाना म एक-एक गरी चाट्थे। अनि फेरी उ आफु खान्थी अनि फेरी मलाइ खुवाउँथी। झन्डै आँधी घन्टामा दुवै टन्न भयौ। अनि त्यसपछि जे भयो त्यो झनै नसोचेको गरी। आखिर सुदिक्षालाइ भएको के हो? मैले पत्तो पाउन सकेको थिइन।
उ बाथरुम छिरी अनि ब्रसमा पेस्ट राखेर माझ्दै कोठामा छिरी।उसको मुख भरी टुथपेस्टको फिज थियो। केही बेर माझे पछि उसले मलाइ त्यही ब्रस दिइ।
‘के गर्ने मैले?’, उसले दाँत माझ्ने इशारा गरी।मैले बिना हिचकिचाहट ब्रसले दाँत माझ्न थाले। तर त्यसमा पेस्ट खासै बाँकी थिएन। म पेस्ट लिन जान उठेको मात्र के थिए। उसले मलाइ खाटमै बस्न भनी। म खुट्टा तल झारेर खाटमा बसे। अनि उ त मेरो काखमा पो बस्न आइ, त्यो पनि आमुन्ने सामुन्ने हुने गरी। उसको मुख र मेरो मुख आमुन्ने सामुन्ने थियो। उ मेरो मुख तिर अगाडी बढी। मैले थाहा पाए उसले के गर्न खोजेकी हो। उसले मेरो ओठमा ओठ जोडी, म अलिकति तल झुकिदिए। उसले मुख भित्रको पेस्टको फिज सबै मेरो मुखमा हाली।मैले दाँत माझे। दुवै जना बाथरुम छिरेम, अनि पानीले मुख कुल्ला गरेम।
दुवै जना खाटमा फर्केम। उ मेरो साइडमा पल्टी।एकछिनपछि चकलेट निकाली अनि मुखमा भित्र खेलाउन थाली।
अनि एकाएक मेरो शरीरमाथी खप्टिइ। अनि ओठमा ओठ जोडी। मैले जिब्रो बाहिर निकाल्न ओठ खोलेको मात्र के थिए, उसको मुखबाट चिप्लो गुलियो र्याल मेरो मुख भरिने गरी छिर्यो। त्यो तातो थुकमा चकलेट नै चकलेट मिसिएको थियो। त्यसको मिठास नै छुट्टै थियो। मैले केही नभनी सबै खाए। अनि उसको जिब्रो चुस्न थाले। जब गुलियो सकिन्थ्यो अनि उसले फेरी चकलेट मुखमा हाल्थी। अनि फेरि त्यसरी नै मुखभरीको थुक मेरो मुखमा हाल्थी। यो अजीवको इच्छा उसलाइ किन भइरहेको छ मैले थाहा पाउन सकेको थिइन। तर जरुरी थिएन। निकै उत्तेजक कुरा हुँदै थियो। म बहिनीको ओठ र जिब्रो चुस्दै थिए, उसैको उक्साहटमा।उ फेरी मेरो शरीरबाट तल झरी अनि मेरो साइडमा पल्टी। टिभी अघि नै देखि चलिरहेको थियो। उसले टिभी तिर ध्यान दिन थाली।‘दादा, मलाइ नुहाइदिनु न।’, उसले एकछिन पछि भनी।‘ल हिड।’, मैले बिना प्रश्न भने।
उ उठी अनि सरासर बाथरुम छिरी। मैले ढोका धकेले। उसले लुगा फुकालिरहेकी थिइ। मैले उसको शरीर नियाल्न थाले। पहिलो पटक उसको दुध देखे अनि पुति देखे। उसले बाथटबमा पानी भरी अनि भित्र छिरी। मैले पनि लुगा फुकाले अनि उसलाइ नुहाइदिन थाले। मेरो ठन्किरहेको लाडो उसले हेरी। तर केही भनिन। मैले उसको सारा शरिरमा साबुन दल्दै सावरले पखाल्दिन थाले। दुवै जना बाथरुमबाट निस्कियौ। मैले उसको शरिरमा टावेलले पानी पुछिदिए। अनि उ त्यतिकै खाटमा पल्टि। म पनि लाडो ठन्काउँदै खाटमा गए। दुवै जना निकै बेरसम्म त्यतिकै बसिरह्यौ। नबोलिकन।
अनि बिस्तारै उसले मेरो लाडो तिर पो हात बढाइ। मैले केही भनिन, थाहा नपाइझै उत्तानो सुतिरहे। उ मेरो खुट्टा तिर गइ अनि मुख भित्र स्वात्त लाडो हाली।
निकै बेरसम्म चुसिरही। अनि फुत्त बाहिर निकाली। लाडोको पानी र उसको थुक मिसिएको चिप्लो कुरा उसको मुखबाट चुहिन थाल्यो।
उसले त्यो सबै मुख भित्र तानी। अनि फेरी लाडो मुख भित्र हाली। पुरै खाउला झै गरी चुसी।
अनि फेरी बाहिर निकाल्दै चिप्लो पानी उसको मुखबाट चुहियो।
उ मतिर हेरेर हाँसी। अनि फेरी लाडो चुस्नमा मस्त भइ। उसले झन्डै १५-२० मिनेटसम्म लाडोबाट निस्किएको सबै चिप्लो पानी चुसिसकेकी थिइ।
घाँटी भित्र लाडो फेरी कोची। अनि क्वाँ क्वाँ गर्दे चुस्न थाली। यसरी चुस्दा त यस्तो आनन्द आयो कि, पुरै सेतो पानी उसको मुख भरी निकालिदिए।
उसले त्यो सबै निलिरहेकी थिइ। मैले लाडो बाहिर निकाले, झटपट अर्को सट सेतो पानी निस्कियो। उसको अनुसार र छाती भरी चुहियो। उ फुसीमय भइ।
उसले हाँस्दै मतिर हेरी।
‘जाउ अनुहार धोएर आउ।’ मैले भने।उ अझै फुसी चाट्दै थिए। दुध हल्लाउँदै बाथरुम छिरी।अनि एकैछिनमा फुसी रहित भएर आइ अनि मेरो साइडमा अंगालो हालेर सुती।मैले उसको दुध चलाउन थाले।उ लाजले भुतुक्कै भइ।‘दादा के गर्नु भको के?’, उसले लाज मानेर भनी।मैले उसको दुध केही बेर मोले अनि उसको दुधको मुन्टा चुस्न थाले।मुन्टा साह्रो भएर लम्बाइ पनि बढी सकेको थियो।‘दादा, नगर्नु न, के गर्नुभ’को अबुइ..’, उसले लजाउँदै भन्दै थिइ।
म उसको शरीरको तल पुगे। मलाइ उसको पुति छुनु थियो। चलाउनु थियो। मुसार्ने मन थियो। मुख्य कुरा त राम्रो संग हेर्नु थियो।‘दादा भो के नगर्नु..’, उसले सानो स्वरमा लाज मान्दै भनी।मैले उसको टाङ फट्याए।
‘दादा भो के, बहिनीसंग यस्तो गर्नु हुँदैन, छोड्नु के।’, उ बोल्दै थिइ, तर उसको शरीर भने उसको आफ्नै बोली सुन्न तयार थिएन। उसले साँप्रा माथी उचालेर मलाइ उसको पुति देखाइ। मैले उसको पुतिको छाला च्यातेर निकै बेर खेलाइरहे।अनि उसलाइ घाँटीमा समातेर घोप्टो पारे।‘दादा अबुइ।’, उ अझै बोल्दै थिइ।मैले उसको पुतिमा लाडो छिराउन खोजे। ठेल्दै छिराउँदै, उ दुखाइले कराउन थाली। मैले प्रयास गरिरहे। ५-१० मिनेटमा उसको दुखाइ कम हुँदै गयो। लाडो भित्र बाहिर सहजै हुन थाल्यो। त्यो दिन दिनभरी कयौं पटक मैले बहिनी चिके। थुप्रै पोजिसनमा उसलाइ चिके। उसले मेरो लाडो पनि निकै पटक चुसी, खुसी हुँदै। पछि मैले उसको पुति चुसे। अनि फेरी चिक्न थाले। उसको र मेरो चिकाइ अहिले पनि जारी छ।
घर भाडामा बस्ने फुच्चि सङ चिकेको